ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတယ်ဆိုတာ ဆိုးသွမ်းတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုဟုတ်ရဲ့လား? | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတယ်ဆိုတာ ဆိုးသွမ်းတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုဟုတ်ရဲ့လား?
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်ရာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာ လူတိုင်းနဲ့ မစိမ်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
အခုမှစပြီး လိင်ကိစ္စနဲ့ တွေ့ကြုံခံစားဖူးသူတွေကအစပြုလို့ လိင်ကိစ္စမှာ အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ဖူးပြီးသားသူတွေကအစ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာနဲ့ပတ်သက်လို့ အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နေနိုင်ပေမယ့် တချို့သောသူတွေရဲ့ အတွေးအမြင်ထဲမှာတော့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဟာ လက်မခံနိုင်စရာ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။
အမှန်တရားကတော့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းဟာ အဆိုးဖက်ရောက်ပြီး မကောင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။
ဘာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို မကောင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းလို့ ယူဆကြလဲ?
ကလေးမွေးဖွားဖို့ သားအိမ်ပါတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ မိခင်ဘဝကို ကျေကျေနပ်နပ်ခံယူသင့်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားတွေနဲ့ သားအိမ်ပါတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ မိမိမှာ ဖြစ်တည်လာတဲ့ သန္ဓေသားကို မွေးဖွားဖို့ စိတ်ကူးမရှိခဲ့ရင် ဒီအမျိုးသမီးတွေကို တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို မကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုလို့ ယူဆလေ့ရှိကြပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်က အမှန်တရားဟာ ဘာလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုတာ ကလေးမွေးဖွားခြင်းမရှိတော့အောင် သန္ဓေတည်တာကို ရပ်စဲလိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါပဲ။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဟာ လိုင်စင်ရ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ လုပ်ဆောင်တဲ့ ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကျယ်ပြန့်ပြီး တွေ့ရများတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း နည်းလမ်း (၂) မျိုးရှိပါတယ်။
ခွဲစိတ်ခြင်းနည်းလမ်း နဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း နည်းလမ်းမှာ ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနဲ့ ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းမှာတော့ ဆေးသောက်ပြီး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနည်းလမ်းများနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ်ကို ဒီလင့်ခ်မှာ https://www.howtouseabortionpill.org/blog/the-different-types-of-abortion/ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို မကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ကြရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ?
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ လက်မခံခဲ့ရင်၊ ဖွင့်ဟပြောဆိုဖို့ အရှက်တရားရှိခဲ့ရင်၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအပါအဝင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလိုအပ်မှုအရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့သူတွေအတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေ အသိပညာတွေနဲ့ အလှမ်းဝေးသွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ မလိုလားအပ်တဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိဘဲ အန္တရာယ်များတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဒီလို လုပ်ဆောင်သူတွေအတွက် အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာနဲ့တဝန်းမှာ ၈ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ သေဆုံးမှုဟာ လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းမှ ဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ထိန်းချုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို တရားဝင်ခွင့်ပြုတဲ့ အရပ်ကို မသွားရောက်နိုင်တဲ့ ကျေးလပ်ဒေသတွေနဲ့ ခေါင်ဖျားတဲ့ ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အသက်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အားလုံးဘာလုပ်သင့်လဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၄ ဦးမှာ ၁ဦးက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားဟာ ပျောက်ကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုးနေပြီး ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းတိုင်းဟာ ခက်ခဲတယ် ဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို ပြောင်းလဲဖို့ လိုပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းအရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနဲ့ ပက်သတ်တဲ့ အသိပညာတွေကို လေ့လာဆည်းပူးသင့်ပြီး မသိသေးသူတွေကို ဝေမျှပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဟာ သမားရိုးကျ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ… လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အသက်တစ်ချောင်းကို ကယ်တင်နိုင်မယ့် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။